ရန်ကုန်မှာ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သူ အများစုဟာ နယ်ကလာတဲ့သူတွေလို့ ပြောဆိုလိုက်တဲ့ သားစိုး - Thadin
[ May 20, 2019 ] လက်ဖဝါးမှာ Xပုံစံ သင်္ကေတလေးပါနေရင် သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို သိထားဖို့လိုပြီ…! ဗေဒင်ယတြာ
[ May 20, 2019 ] ကားနဲ့ချိတ်မိပြီး… ခြေတစ်ဖပ်ပါသွားတာကို… မြန်မာဆိုပြီး ကားသမားက… ရော်ကြေးပြန်တောင်းနေတယ်…! NEWS
[ May 20, 2019 ] ကောင်လေးက ကောင်မလေးကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းတုန်းကစကားလုံး ၅ လုံးပဲ ပြောခဲ့တယ်…! KNOWLEDGE
[ May 20, 2019 ] ပဋ္ဌာန်း​တရားသံကြားပြီး တရားနာချင်လို့ လိုက်ပို့ခိုင်းတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦး…! NEWS
[ May 19, 2019 ] ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်တွင် အရက်သမားများ၏ အလှူငွေဖြင့် စေတီတည်…! NEWS
HomeCELEBRITYရန်ကုန်မှာ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သူ အများစုဟာ နယ်ကလာတဲ့သူတွေလို့ ပြောဆိုလိုက်တဲ့ သားစိုး
ရန်ကုန်မှာ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သူ အများစုဟာ နယ်ကလာတဲ့သူတွေလို့ ပြောဆိုလိုက်တဲ့ သားစိုး
March 17, 2019 Kay Kay CELEBRITY Comments Off on ရန်ကုန်မှာ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သူ အများစုဟာ နယ်ကလာတဲ့သူတွေလို့ ပြောဆိုလိုက်တဲ့ သားစိုး
တချိန်တုန်းက သူ့ရဲ့ Remix သီချင်းတွေနဲ့ သင်္ကြန်တွေကို လွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့သူ သားစိုးကတော့ လက်ရှိမှာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်နေတာ တွေ့မြင်ရပါတယ် ။ ရောသမနှပ်ဆိုတဲ့ လက်ဖက်ကိုလည်း ဦးဆောင် ထုတ်လုပ်နေတာ တွေ့ရပါတယ် ။ အဆိုတော်သားစိုးကတော့ အနုပညာ အလုပ်တွေအပြင် စီးပွာေးရးမှာလည်း ဦးဆောင် လုပ်ကိုင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
အဆိုတော်သားစိုးက ရန်ကုန်မြို့မှာ မွေးဖွားလာသူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ငယ်စဉ်တည်းက ရန်ကုန်မှာပဲ နေထိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မြို့ကြီးတစ်မြို့ ဖြစ်နေတဲ့ ရန်ကုန်ဟာ တနေ့ထက်တနေ့ မော်တော်ယာဉ်တွေ များပြားလာပြီး ယာဉ်စည်းကမ်း ၊ လမ်းစည်းကမ်း ဖောက်ဖျက်သူတွေလည်း နေ့စဉ်နဲ့အမျှ မြင်တွေ့ကြရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သားစိုးကတော့ ဒီလိုမျိုး စည်းကမ်းမဲ့မှုတွေဟာ အစိုးရအပြင် ပြည်သူလူထုတွေနဲ့လည်း သက်ဆိုင်ကြောင်း ပြောပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ရန်ကုန်မြို့မှာ နယ်အစုံကနေ လာရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်သူတွေများပြားလာပြီး စည်းကမ်းဖျက်သူများဟာလည်း နယ်ကလူတွေ များတဲ့အကြောင်းဆိုပါတယ် ။
“အဓိက ကျတော်မြင်တာကတော့ အစိုးရအပြင် လူတွေနဲ့လည်း ဆိုင်ပါတယ် ရန်ကုန်မြို့မှာ နေတဲ့လူတွေပေါ့နော် ။ ကျတော်ဆို ရန်ကုန်မှာပဲ မွေးပါတယ် ရန်ကုန်မှာပဲ ကြီးပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကျတော်တို့ စည်းကမ်းအရမ်း ချိုးဖောက်တာတွေ ကျတော်နဲ့ အတူတူ အသက်ကြီးခဲ့တဲ့ လူတွေပေါ့နော် အက်ဆစ် သီအိုရီ စသည်ဖြင့် ပေါ့နော် ဟစ်ဟော့တွေလည်း ဆိုခဲ့တယ် ။ ရန်ကုန်မှာ တသက်လုံးနေလာခဲ့ကြတဲ့ လူငယ်တွေကနေ ခု လူလတ်တွေဖြစ်လာကြတယ် ။
ကျတော်တို့ တွေ အဲ့လောက်ကြီး စည်းကမ်းမဖောက်ပါဘူး ။ အဓိကအားဖြင့် ကျတော်တို့ ရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့ အခါမှာ အခုဆို နယ်အစုံက ရောက်လာတဲ့သူတွေ ရှိတာပေါ့နော် သူတို့တွေကနေ စည်းကမ်းတွေဖောက်တာ များတယ် ။ ကျတော်တို့ကလည်း မပြောနိုင်ဘူး ပြောရမှာ အစိုးရတွေ အလုပ်လေ ။ အစိုးရကလည်း မပြောနိုင်ဘူး ပြည်သူကလည်း မလိုက်နာနိုင်ဘူး ။ အဲတော့ ဂျာအေးသူ့အမေရိုက်ပြီး လည်နေကြရော”
ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဆိုးဝါးဆုံးသော စည်းမရှိမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကွမ်းတံတွေးကို တွေ့ရာနေရာမှာ ထွေးခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း သားစိုးက ခုလိုပဲ သူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြောပြလာပါသေးတယ် “အဓိကအားဖြင့် လူတွေကလေ ဒီအချိန်မှာ အများပြည်သူ လူထုကတင်မြောက်တဲ့ အစိုးရက တက်လာတဲ့အခါမှာ ဒီပြည်သူ့ အစိုးရရဲ့ စည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်လို့ ။ ဒါမှလည်း စည်းကမ်းရှိပြီး တိုးတက်တဲ့ မြို့တော်ဖြစ်မယ်လို့ ကျတော် ယုံကြည်ပါတယ် အများပြည်သူကလည်း လိုက်နာသင့်ပါတယ် ။ ကျတော် အင်္ဂလန်မှာ 2001 ကနေပြီးတော့ 2005 ထိ ကျောင်းတက်ခဲ့ပါတယ် ။ အဲ့မှာ အမှိုက်ပစ်တာ ၊ တံတွေးထွေးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ တော်တော်လေးကို ဆင်ခြင်ကြတာ တွေ့ရပါတယ် ။
အဓိကအားဖြင့် ကျတော်တို့ ရန်ကုန်မှာ တွေ့ရတာ ကွမ်းတံတွေးထွေးတာပါ ကွမ်းတံတွေးထွေးခြင်းကြောင့် မိမိ ပါးစပ်က ထွက်တာဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့ တီဗီရောဂါတွေ ၊ အခြား ကိုယ့်မှာ ရောဂါတွေ ရှိတယ်ဆိုရင် ကွမ်းတံတွေး ထွေးခြင်းအားဖြင့် ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ လေနဲ့အတူ ရောဂါပိုးတွေပျံ့နှံ့သွားပြီး ကူးတယ်ဆိုတာ အဲ့တည်းက ကျတော်သိရပါတယ် ။ အဲ့တည်းက ကျတော့်မိတ်ဆွေ ၊ သူငယ်ချင်းတွေကို တတ်နိုင်သလောက်ြပြောပြပါတယ် ။ ဘယ်သူမှ နားမထောင်ပါဘူး ။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ပြသနာတွေကို လမ်းမပေါ်မှာထွေးတဲ့ အတွက်ကြောင့် အရမ်းအန္တရာယ်များတာကို တွေ့ရပါတယ် ။
ဒါတွေက 2004 လောက်တည်းက ဆင်ခြင်စေချင်တာ ဒါပေမယ့် မရပါဘူး ။ ခုကျတော့ တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ ပြောင်းလဲလာတာမြင်ရတော့ ဝမ်းသာပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကွမ်းတံတွေးပြသနာကတော့ မပြီးသေးဘူးပေါ့နော် ။ ကွမ်းတံတွေးက စားတဲ့သူတွေကလည်း ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ် ။ ဘာလို့ဆို ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ ရောဂါကို သူများကို ဖြန့်သလိုဖြစ်နေတာ ။” လို့ ကွမ်းတံတွေးထွေးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အများပြည်သူတွေကို မထိခိုက်ဖို့ အကုန်သိ သတင်းဌာနရဲ့မေးမြန်းချက်မှာ ဖြေဆိုထားပါတယ် ။
ကဲ ပရိသတ်ကြီးကရော သားစိုးရဲ့ ယခုအမြင်တွေအပေါ်မှာ မှတ်ချက်ပေးစရာလေးတွေ ရှိရင်လည်း ပြောပြခဲ့ပါဦးနော် ။
Photos-Thar Soe;We Love Cele
တခြိနျတုနျးက သူ့ရဲ့ Remix သီခငျြးတှနေဲ့ သွင်ျကနျတှကေို လှမျးမိုးနိုငျခဲ့သူ သားစိုးကတော့ လကျရှိမှာ စီးပှားရေး လုပျငနျးတှကေို လုပျကိုငျနတော တှမွေ့ငျရပါတယျ ။ ရောသမနှပျဆိုတဲ့ လကျဖကျကိုလညျး ဦးဆောငျ ထုတျလုပျနတော တှရေ့ပါတယျ ။ အဆိုတျောသားစိုးကတော့ အနုပညာ အလုပျတှအေပွငျ စီးပှာေးရးမှာလညျး ဦးဆောငျ လုပျကိုငျနတော ဖွဈပါတယျ ။
အဆိုတျောသားစိုးက ရနျကုနျမွို့မှာ မှေးဖှားလာသူ တဈဦးဖွဈပွီး ငယျစဉျတညျးက ရနျကုနျမှာပဲ နထေိုငျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ ။ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ မွို့ကွီးတဈမွို့ ဖွဈနတေဲ့ ရနျကုနျဟာ တနထေ့ကျတနေ့ မျောတျောယာဉျတှေ မြားပွားလာပွီး ယာဉျစညျးကမျး ၊ လမျးစညျးကမျး ဖောကျဖကျြသူတှလေညျး နစေ့ဉျနဲ့အမြှ မွငျတှကွေ့ရမှာပဲ ဖွဈပါတယျ ။ သားစိုးကတော့ ဒီလိုမြိုး စညျးကမျးမဲ့မှုတှဟော အစိုးရအပွငျ ပွညျသူလူထုတှနေဲ့လညျး သကျဆိုငျကွောငျး ပွောပါတယျ ။ ဒါ့အပွငျ ရနျကုနျမွို့မှာ နယျအစုံကနေ လာရောကျ အလုပျလုပျကိုငျသူတှမြေားပွားလာပွီး စညျးကမျးဖကျြသူမြားဟာလညျး နယျကလူတှေ မြားတဲ့အကွောငျးဆိုပါတယျ ။
“အဓိက ကတြျောမွငျတာကတော့ အစိုးရအပွငျ လူတှနေဲ့လညျး ဆိုငျပါတယျ ရနျကုနျမွို့မှာ နတေဲ့လူတှပေေါ့နျော ။ ကတြျောဆို ရနျကုနျမှာပဲ မှေးပါတယျ ရနျကုနျမှာပဲ ကွီးပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ကတြျောတို့ စညျးကမျးအရမျး ခြိုးဖောကျတာတှေ ကတြျောနဲ့ အတူတူ အသကျကွီးခဲ့တဲ့ လူတှပေေါ့နျော အကျဆဈ သီအိုရီ စသညျဖွငျ့ ပေါ့နျော ဟဈဟော့တှလေညျး ဆိုခဲ့တယျ ။ ရနျကုနျမှာ တသကျလုံးနလောခဲ့ကွတဲ့ လူငယျတှကေနေ ခု လူလတျတှဖွေဈလာကွတယျ ။
ကတြျောတို့ တှေ အဲ့လောကျကွီး စညျးကမျးမဖောကျပါဘူး ။ အဓိကအားဖွငျ့ ကတြျောတို့ ရနျကုနျရောကျလာတဲ့ အခါမှာ အခုဆို နယျအစုံက ရောကျလာတဲ့သူတှေ ရှိတာပေါ့နျော သူတို့တှကေနေ စညျးကမျးတှဖေောကျတာ မြားတယျ ။ ကတြျောတို့ကလညျး မပွောနိုငျဘူး ပွောရမှာ အစိုးရတှေ အလုပျလေ ။ အစိုးရကလညျး မပွောနိုငျဘူး ပွညျသူကလညျး မလိုကျနာနိုငျဘူး ။ အဲတော့ ဂြာအေးသူ့အမရေိုကျပွီး လညျနကွေရော”
ဒါ့အပွငျ မွနျမာနိုငျငံမှာ အဆိုးဝါးဆုံးသော စညျးမရှိမှုတဈခုဖွဈတဲ့ ကှမျးတံတှေးကို တှရေ့ာနရောမှာ ထှေးခွငျးနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့လညျး သားစိုးက ခုလိုပဲ သူ့ရဲ့အမွငျကိုပွောပွလာပါသေးတယျ “အဓိကအားဖွငျ့ လူတှကေလေ ဒီအခြိနျမှာ အမြားပွညျသူ လူထုကတငျမွောကျတဲ့ အစိုးရက တကျလာတဲ့အခါမှာ ဒီပွညျသူ့ အစိုးရရဲ့ စညျးကမျးတှကေို လိုကျနာသငျ့ပါတယျလို့ ။ ဒါမှလညျး စညျးကမျးရှိပွီး တိုးတကျတဲ့ မွို့တျောဖွဈမယျလို့ ကတြျော ယုံကွညျပါတယျ အမြားပွညျသူကလညျး လိုကျနာသငျ့ပါတယျ ။ ကတြျော အင်ျဂလနျမှာ 2001 ကနပွေီးတော့ 2005 ထိ ကြောငျးတကျခဲ့ပါတယျ ။ အဲ့မှာ အမှိုကျပဈတာ ၊ တံတှေးထှေးတာနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ တျောတျောလေးကို ဆငျခွငျကွတာ တှရေ့ပါတယျ ။
အဓိကအားဖွငျ့ ကတြျောတို့ ရနျကုနျမှာ တှရေ့တာ ကှမျးတံတှေးထှေးတာပါ ကှမျးတံတှေးထှေးခွငျးကွောငျ့ မိမိ ပါးစပျက ထှကျတာဖွဈတဲ့ အတှကျကွောငျ့မို့ တီဗီရောဂါတှေ ၊ အခွား ကိုယျ့မှာ ရောဂါတှေ ရှိတယျဆိုရငျ ကှမျးတံတှေး ထှေးခွငျးအားဖွငျ့ ပလကျဖောငျးပျေါမှာ လနေဲ့အတူ ရောဂါပိုးတှပြေံ့နှံ့သှားပွီး ကူးတယျဆိုတာ အဲ့တညျးက ကတြျောသိရပါတယျ ။ အဲ့တညျးက ကတြေျာ့မိတျဆှေ ၊ သူငယျခငျြးတှကေို တတျနိုငျသလွောကျပွောပွပါတယျ ။ ဘယျသူမှ နားမထောငျပါဘူး ။ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ အန်တရာယျရှိတဲ့ ပွသနာတှကေို လမျးမပျေါမှာထှေးတဲ့ အတှကျကွောငျ့ အရမျးအန်တရာယျမြားတာကို တှရေ့ပါတယျ ။
ဒါတှကေ 2004 လောကျတညျးက ဆငျခွငျစခေငျြတာ ဒါပမေယျ့ မရပါဘူး ။ ခုကတြော့ တဖွညျးဖွညျးခငျြးနဲ့ ပွောငျးလဲလာတာမွငျရတော့ ဝမျးသာပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ကှမျးတံတှေးပွသနာကတော့ မပွီးသေးဘူးပေါ့နျော ။ ကှမျးတံတှေးက စားတဲ့သူတှကေလညျး ဆငျခွငျသငျ့ပါတယျ ။ ဘာလို့ဆို ကိုယျ့မှာရှိတဲ့ ရောဂါကို သူမြားကို ဖွနျ့သလိုဖွဈနတော ။” လို့ ကှမျးတံတှေးထှေးတာနဲ့ ပတျသကျပွီး အမြားပွညျသူတှကေို မထိခိုကျဖို့ အကုနျသိ သတငျးဌာနရဲ့မေးမွနျးခကျြမှာ ဖွဆေိုထားပါတယျ ။
ကဲ ပရိသတျကွီးကရော သားစိုးရဲ့ ယခုအမွငျတှအေပျေါမှာ မှတျခကျြပေးစရာလေးတှေ ရှိရငျလညျး ပွောပွခဲ့ပါဦးနျော ။
ဝါယာရှော့ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းအရင်းနဲ့ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်နည်း
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ ကိုယ်ရံတော် မိန်းကလေးကို အခုလိုမလုပ်သင့်
Users Yesterday : 1869
This Month : 38204
This Year : 233602
Total Users : 592626
Views Today : 2303
Total views : 2719443